Samsung ayaa wali sii lumineysa iibinta Shiinaha iyo Hindiya | Androidsis
Samsung maheyn wax wanaagsan 2018. Shirkada Kuuriya iibkeedu aad ayuu hoos ugu dhacay waxayna arkeen qaar badan oo kamid ah tartamayaasha, gaar ahaan Huawei. Xilligan waxaa jira laba suuq oo fure u ah noocyo badan, sida Shiinaha iyo Hindiya. Midda labaad, sumadda Kuuriya ayaa leh natiijooyin aad u wanaagsan, gaar ahaan dhamaadka sare, laakiin waxay lumisay hoggaankii ay doorbideysay Xiaomi.
Laakiin waxay umuuqataa in joogitaankeeda labadan suuq aysan maraynin waqtigeedii ugu fiicnaa. Samsung waxay joojisay ku-guuleysiga Shiinaha muddo ka hor, halkaas oo taleefannadooda aysan ahayn kuwa ugu iibsiga badan. Laakiin marka laga hadlayo Hindiya, suuq ay si fiican wax ugu iibin jirtay, waxay lumiyeen joogitaankoodii 2018.
Warshadaha taleefanka ee Hindiya waxay ku saleysan yihiin qiimaha. Sidaa darteed, waxaan aragnaa sida noocyada sida Xiaomi ay u leeyihiin guul weyn, wax si weyn u saameynaya Samsung, taas oo u aragta sida iibkeeda suuq muhiimad weyn u leh sidan oo kale ay u bilaabanayaan inay hoos u dhacaan.
Moodellada qiimaha ka hooseeya 200 euro waa kuwa ugu fiican iibiyaasha Hindiya. U oggolaanshaha sumcadaha Shiinaha, sida Xiaomi, OPPO ama Huawei, iyo kuwo kale oo badan, inay iib wanaagsan ku yeeshaan dalkan. Xaqiiqdii, sida laga soo xigtay xogta ugu dambeysay ee waddanka, shanta taleefoon ee ugu iibinta badan wadankaas ayaa ku kacay wax ka yar $ 100.
Samsung ma ahan nooc leh moodooyin badan oo noocyadeeda hooseeya oo leh qiimo hooseeya. In kasta oo ay heystaan ​​qalab leh Android Go oo ah nidaamka qalliinka, taasi waxay leedahay qiimo hoose. Laakiin badankood moodooyinka waa heer dhexe iyo heer sare, oo qiimahoodu aad ugu badan yahay suuq sida Hindiya oo kale ah.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko waxa dhacaya 2019. Samsung waxay ku jirtaa dayactir buuxa oo kala duwan ah, oo leh moodallo cusub oo ballan qaadaya inay hal-abuurnimo badan yeelan doonaan, kana bilaabmaya mid cusub -dhamaadka sare leh Galaxy S10 kaas oo imaan doona bisha Febraayo iyo iyada telefoonka laabma, kaas oo la sii deyn doono xagaagan. Miyay kaa caawin doontaa inaad hagaajiso iibkaaga Hindiya?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung waxay sii wadaa inay lumiso dhulkeeda Shiinaha iyo Hindiya
Sida loo dejiyo taleefankaaga ugu horreeya ee Android